Iindaba - Izibane zamandla elanga
1. Zithatha ixesha elingakanani izibane zelanga?
Ngokubanzi, iibhetri kwizibane zangaphandle zelanga zinokulindeleka ukuba zihlale malunga neminyaka emi-3-4 ngaphambi kokuba zitshintshwe. Ii-LED ngokwazo zinokuhlala iminyaka elishumi okanye nangaphezulu.
Uya kwazi ukuba lixesha lokutshintsha iinxalenye xa izibane zingakwazi ukugcina umrhumo wokukhanyisa indawo ebusuku.
Kukho izinto ezimbalwa ezinokuhlengahlengiswa ezinokuchaphazela ubomi bezibane zakho zangaphandle zelanga.
Kokunye, ukubekwa kwabo ngokunxulumene nezinye izibane ezingezizo kunganciphisa okanye kwandise ixesha labo elide. Qiniseka ukuba izibane zakho zangaphandle zelanga zibekwe kwilanga elithe ngqo kumgama ovela kwizibane zasesitratweni okanye kwizibane zendlu, kuba kufutshane kakhulu kufutshane kunokulahla izivamvo ezibangela ukuba zikhabe kwizibane eziphantsi.
Ngaphandle kwendawo ekuyo, ukucoceka kweepaneli zelanga kunokuba yinto ebalulekileyo ekugcineni ukukhanya kwelanga. Ngokukodwa ukuba izibane zakho zikufuphi negadi okanye enye indawo engcolileyo, qiniseka ukuba uzisula iipaneli rhoqo emva kweveki ukuze zifumane ukukhanya kwelanga okwaneleyo.
Ngelixa iinkqubo ezininzi zokukhanyisa zenzelwe ukumelana neentlobo ezahlukeneyo zemozulu kunye nemozulu, zisebenza kakuhle xa zinokufumana usuku olupheleleyo lokukhanya kwelanga kwaye azikho emngciphekweni wokugutyungelwa likhephu okanye zibethwe yimimoya ebhudla ngamandla. Ukuba unenkxalabo yemozulu ngamaxesha athile onyaka achaphazela izibane zakho zelanga, cinga ngokuzigcina kula maxesha.
2. Ziba kude kangakanani izibane zelanga?
Ukuba izibane zakho zangaphandle zelanga zifumana ilanga elaneleyo ngentlawulo epheleleyo (ngesiqhelo malunga neeyure ezisibhozo), ziya kuba nakho ukukhanyisa konke ukuhlwa, ukuqala xa ukukhanya kusihla, ukutshona kwelanga.
Ngamanye amaxesha izibane ziya kuhlala ixesha elide okanye ezimfutshane, ingxaki enokuthi ibangelwe yindlela iipaneli ezikwazi ngayo ukungenisa ukukhanya. Kwakhona, ukujonga ukuqinisekisa ukuba izibane zakho zikwindawo elungileyo (kwilanga elithe ngqo, kude nezithunzi okanye zigutyungelwe zizityalo) kunokunceda ekuqinisekiseni ukuba benza ngokusemandleni abo.
Ukuba unenkxalabo yokuba iibhetri kwezibane zakho zisetyenziswa gwenxa, cinga nokuba usete ixesha lesibane okanye uzicime kwaye / okanye uzibeke kude kangangexesha elithile. Unokufuna ukuvavanya iindawo ezimbalwa ezahlukeneyo ngaphambi kokuthatha isigqibo kwindawo esisigxina yezibane zakho.
3. Solar light iingcebiso zobomi
Ungafumanisa ukuba kubomi bokukhanya kwakho, oqubisana neengxaki ezithile ekusebenzeni kwazo.
Iingxaki eziqhelekileyo zibandakanya ukusweleka kwebhetri, ukukhanya okungenamandla ngenxa yokufunxeka kwelanga, okanye ukungasebenzi kakuhle kokukhanya. Le micimbi inokubangelwa kukukhanya kwelanga okanye ukucoceka kweepaneli zelanga ngokwazo.